Fitaovana masinina electromagnetic masinina manafina ny toetra mampiavaka azy sy ny fitsipiky ny miasa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-27
Ny toetra mampiavaka azy sy ny fitsipiky ny fiasan'ny masinina elektromagnetika an'ny kojakoja masinina sarontava. Ny clutch electromagnetic dia fitaovana famokarana ilaina amin'ny masinina sarontava. Ny fametahana elektrômanetika tsara dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny masinina misaron-tava sy ...
Endri-javatra sy fahatsinjovana ny fanodinana ireo masinina mihetsika
Ny indostrian'ny milina mazava tsara dia orinasa mazoto miasa mafy, matanjaka amin'ny renivohitra ary matanjaka amin'ny haitao. Manana ambaratonga avo ny indostria. Na dia tsy mahatratra ambaratonga iray aza ny orinasa ankapobeny dia ho sarotra ny hiteraka tombom-barotra. Orinasa lehibe afaka mampihena ny vidiny ...
Fantatsika fa ny milina mazava tsara dia mitaky fitakiana avo lenta amin'ny fametahana, ny famaritana mazava tsara dia manana fahamendrehana tsara, ny famokarana avo lenta ary ny fametrahana fitaovana marina, ka afaka manodina ampahany misy zavatra takiana mazava tsara. Ka inona avy ireo faritra mety amin'ny milina marina? Ireto manaraka ireto dia ...